Indlela yokuthintela kunye nokuNceda ukuQeqesana neRhinitis kwiimpawu zaBantwana | IBezzia
Ungathintela njani kwaye uKhulule njani iiMpawu zeRhinitis eziQhelekileyo kuBantwana
UMaria Jose Roldan | 26/03/2021 22:00 | Ingcebiso koomama
Ngokufika kwentwasahlobo kukho iimeko ezininzi zokungezwani komzimba ezenzeka kwinxalenye enkulu yabemi. Kwimeko yabantwana, eyona nto ixhaphakileyo ibizwa ngokuba yi-allergen rhinitis.
Le meko yokuphefumla iyacaphukisa eyona incinci yendlu kuba ibangela ukuxinana okunamandla empumlweni kunye nokucaphuka okukhulu emehlweni. Kwinqaku elilandelayo siza kukubonisa uthotho lweengcebiso ezinokunceda ukunciphisa ezi mpawu.
1 Ziintoni iimpawu ze-allergen rhinitis ebantwaneni
2 Ungazithintela njani iimpawu zerhinitis eyaliwa
3 Ungazikhulula njani iimpawu zerhinitis eyaliwa
Ziintoni iimpawu ze-allergen rhinitis ebantwaneni
Ubukho bomungu kokusingqongileyo sesona sizathu siphambili se-rhinitis yegazi ebantwaneni. Esi sifo sibangela ukukrazula kunye nokucaphuka kwamehlo kunye nenani elikhulu le-mucus emathatheni kunye nomqala othile. Kuluhlu lweempawu ezicaphukisa abantwana, kungoko ukubaluleka kokubathintela nokubanciphisa.
Ungazithintela njani iimpawu zerhinitis eyaliwa
Kubalulekile ukugcina okusingqongileyo ekhaya kucocekile kwaye kucocekile kangangoko ke kubalulekile ukucoca yonke indlu rhoqo.
Kuya kufuneka uphephe ukuba nezityalo ezivelisa umungu kunye izilwanyana ezilahlekelwa ziinwele ezininzi.
Igumbi lomntwana kufuneka lingene umoya yonke imihla kwaye uhlambe izinto zokulala kube kanye ngeveki.
Kuphephe iidrafti ngaphakathi endlwini kwaye izithuba ezinothuli oluninzi.
Kubaluleke kakhulu ukuhlamba izandla zomntwana wakho amaxesha amaninzi ngemini, ngakumbi ukuba ebedlala esitratweni.
Ukutya okufanelekileyo kubalulekile xa kufikwa ekuthinteleni iimpawu ze-allergen rhinitis. Ukutya kufuneka kutyebile kwiziqhamo kunye nemifuno etyebileyo ku-vitamin C. Ukutya kwe-folic acid kufanelekile ukuthintela iimpawu ezinokubangelwa kukungabikho komzimba.
Ungazikhulula njani iimpawu zerhinitis eyaliwa
Iziyobisi okanye amayeza ziphambili xa kufikwa ekunciphiseni iimpawu. Zombini ii-antihistamines kunye ne-corticosteroids kufuneka zenziwe ngugqirha.
Ngaphandle kweziyobisi, Ungaluthathela ingqalelo uthotho lweengcebiso ezikunceda ukunciphisa ezi mpawu zikhankanywe apha ngasentla:
Coca kwaye uhlambe kakuhle iimpumlo zomntwana ngoncedo lwesaline.
Phakamisa umatrasi ebhedini Ukuthintela i-mucus ekuqokelelekeni kweempumlo.
Sebenzisa isikhuseli egumbini kubalulekile xa kufikwa ekufumaneni imeko enomswakama.
Ukusela amanzi amaninzi kunceda ukuncipha kwencindi kwaye ungabinampumlo eninzi.
Coca amehlo ngegauze kunye nomxube omncinci wetyuwa.
Ngamafutshane, ngokufika kwentwasahlobo, i-allergen rhinitis ixhaphake kakhulu ebantwaneni, Ukuba ziimpawu zokungezwani komzimba ziyacaphukisa kwaye azonwabisi. Kubalulekile ukuba abazali bathathe onke amanyathelo othintelo ukuze umntwana aphile ubomi obutofotofo kangangoko kwaye angonzakaliswa yile rhinitis ikhankanywe ngasentla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Ingcebiso koomama » Ungathintela njani kwaye uKhulule njani iiMpawu zeRhinitis eziQhelekileyo kuBantwana
Uthini umkhondo wendalo kunye nendlela yokunciphisa
Iindidi ezi-5 zezibane zodonga zokukhanyisa iikona zakho